नयाँ पोल खुल्यो प्रचण्डको, यस्ता कुरामा पनि बार्गेनिङ ? यो त हद भएन र ?
नेकपा एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विरुद्ध चर्को भाषण गरेर हिँडेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको नयाँ पोल खुलेको छ ।
शनिबार, अशोज ९, २०७८ ९:३०
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विरुद्ध चर्को भाषण गरेर हिँडेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको नयाँ पोल खुलेको छ । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
प्रष्ट बक्ता रहेका नेकपा एमालेका नेता केशव स्थापितले प्रचण्डको पोल खोलिदिएका हुन् । स्थापितको खुलासाले मौका पायो भने प्रचण्ड के सम्म पनि गर्न तयार हुने मान्छे रहेछन् भन्ने कुुरा पनि प्रष्ट भएको छ ।
लामो समय देखी नेपालमा गाँजा खेतिलाई बैद्य बनाउँनु पर्छ भनेर अभियान चलाइरहेका एमाले नेता स्थापितले प्रचण्डलाई गाँजाका बिषयमा बोल्न अनुरोध गर्दा पहिला माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्नुस अनि बोल्न तयार छु भनेर बार्गेनिङ गरेको खुलासा गरेका छन् ।
स्थापितको यस्तो खुलासाले प्रचण्ड सँग केहि प्रश्नहरु उठेका छन् के केशव स्थापित माओवादीमा गए गाँजा राम्रो हुने नगए नहुने हो र ? यदि साँच्चै गाँजा प्रतिबन्धनै लागाउनु पर्ने कुरा रहेछ भने स्थापीत आउँदैमा राम्रो हुने नेपाली जनताको आर्थिक हैसियत बढाउँन गजबको चिज रहेछ भने स्थापीत नआए बोल्नै नहुने कुरो हो र ?
जे सुकै कुरालाई पनि पार्टी सँग जोडेर हेर्ने कस्तो प्रचण्ड पथ हो भन्ने गम्भिर प्रश्न पनि उठेको छ । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा राजीव काफ्ले पक्राउको विरोध कार्यक्रममा पुगेका स्थापितले विगतमा पूर्वप्रधामन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई गाँजाको उचित प्रयोगबारे बोल्न भनेको खुलासा गरे ।
गाँजालाई खुकुलो बनाएर देश हितमा काम गर्न सकिनेबारे प्रचण्डलाई बोल्न भन्दा शर्त राखेको खुलासा गरे । उनले भने, ‘प्रचण्डले मलाई आफ्नो पार्टीमा लागे मात्र यस विषयमा बोल्छु भने ।’
माधव नेपाललाई पनि विगतमा गाँजाको महत्वबारे बोल्दै खुकुलो पारी सदुपयोग गर्नेबारे सुझाव दिदा पहिले प्रशंशा गरेको र भोलिपल्ट नकारात्मक प्रभाव पर्ने जवाफ दिएको सुनाए ।
राजाका पालामा रक्तदान गर्ने क्रममा आफूलाई प्रहरीले १४ महिनसम्म थुनेको स्मरण गराउँदै गाँजालाई खुल्ला गर्नेबारे भने,‘मैले यस विषयमा माधव नेपाल सँग कुरा गरेका थिए । यस बेला निकै प्रशंसा गरेका थिए । तर, भालि पल्ट यसको प्रचार नगर्नुस यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ र खाएर दुःख दिन्छन् भने ।’
नेपाली काँग्रेसका कतिपय नेताहरुले समेत गाँजालाई वैधानिकता दिनपर्छ भन्दै उफ्रिएका बताए । काँग्रेसको महाधिवेशनमा समेत यस विषयमा चर्चा हुने उनको भनाई थियो ।
गाँजालाई फुकुवा भन्दा पनि यसलाई औषधी प्रयोजनाका लागि वैधानिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘नेपालमा रहेका युवाहरुलाई गाँजाको सही प्रयोग गरी रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ ।’
नेताहरु यस विषयप्रति अज्ञान रहेको बताए । गाँजालाई सकारात्मक ढंकले प्रयोग गरे देशको कायापलट हुने उनको भनाई थियो । आफ्नो पार्टीले गाँजालाई वैधानिकता दिन हर प्रयास गर्ने समेत बताए ।